सभापतिको काम महामन्त्रीको मूल्यांकन : झुक्याउँदै केन्द्रीय सदस्य नियुक्ति गर्दै ! « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
सभापतिको काम महामन्त्रीको मूल्यांकन : झुक्याउँदै केन्द्रीय सदस्य नियुक्ति गर्दै !
नेपाली काग्रेसका विगतका महाधिवेशनहरुमा एजेण्डा एजेण्डा भन्दा नेता प्रधान हुन्थे । १३ महाधिवेशनसम्म त्यसरी नै चल्यो । आठौँ महाधिवेशन (२०४८) का विशेषता आफनै थिए । प्रजातन्त्र आएपछि यो पहिलो माहाधिवेश थियो जसमा कृष्णप्रसद भट्टराइ निर्विरोध छानिएका थिए झापाको कलवलगुडीमा ।
त्यसपछि नवौंदेखि एघारौंसम्म गिरिजाप्रासद कोइराला सभापति छानिए प्रतिश्पर्धाबाट नै । त्यो प्रतिश्पर्धा झिनो थियो तर निर्विरोध भएनन कुनैपनि समयमा । उनले नीति र कार्यक्रम ल्याउने प्रचलन बसाले २०५३ को नवौ महाधिवेशनमा तर त्यो खासै प्रभावकारी भएन । उनीसंग प्रतिश्पर्धा गर्ने व्यक्तित्व नभएका कारणपनि होला निर्वाचन भएपनि त्यसपछिका दिनमा नेतृत्वको विगतको काम खोजिएन ।
१२ औंमा एक प्रकारले कडा रुपको प्रतिश्पर्धा थियो । सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा बीच । यो नयाँ पुस्तामा नेतृत्व गएको अवस्था पनि हो । सुशील कोइरालाले पहिलो चरणमा नै जिते । तर उनले पनि एजेण्डाले चाहिँ जितेका होइनन् ।
तेह्रौं महाधिवेशनमा देवाले जिते प्रतिश्पर्धी रामचन्द्र पौडेललाई हराउदै । तर दोस्रो चरणमा । देउवासँगपनि एजेण्डा चाहिँ थिएनन । एजेण्डा थियो भने त्यसबेला उनलाई साथदिनेहरु उनकै खेमाका, उनैले मनोनित गरेका उपसभपति समेतले छाडेको (चर्चामा आए अनुसार) कुरा आउने थिएन होला । जे थिए ती सबै मौखिक थिए होलान र अर्को महाधिवेशन आइपुग्दा नपुग्दै सबै छरपष्ट पनि भए ।
तर यो चौधौं महाधिवेशन चाहिँ एजेण्डाका साथ हुन्छ कि जस्तो देखिदै छ अहिलेसम्मका सँकेतहरु हेर्दा । यही सन्दर्भमा हो सभापतिले के-के गरे त भन्ने प्रश्न उठेको र त्यसको मूल्यांकन स्वयम् महामन्त्रीले गरेका छन । यो मूल्यांकन हेर्दा यो कालमा नोपली कांग्रेसको संगठन कसरी चलको रहेछ भने सानोतिनो भएपनि एउटा चित्र चाहि प्रकट हुन्छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापति कार्यकाल, यो बेला साढे ४ वर्ष भन्दाबढीको हुँदा महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको यस्तो मूल्यांकन आएको हो जो त्यति राम्रो छैन । सभापति देउवामाथि यो दलका कार्यकर्ताले लगाएको सबै भन्दा पछिल्लो आरोप हो महाधिवेशन गर्न नचाहने वा नसक्ने भन्ने । आउँदो फागुनमा प्रस्ताव भएको महाधिवेशन सहज समयको होइन । नेपाली कांग्रेसको विधानमा चारवर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्छ । देशमा कुनै त्यस्तो दैविक आपत्ति वा त्यस्तै केही आइपरेमा मात्रै बढीमा एकवर्षको म्याद थप्न पाइन्छ ।
यो आउँदै गरेको फागुन ७ त्यही भैपरीमा हुनलागेको महाधिवेशन हो । देउवाको सभापतित्वकालका चारवर्षमा कुनै त्यस्तो भैपरी आइपरेको थिएन । तर अवस्था कस्तो आयो भने त्यो भैपरीको पनि अन्तिम दिनका लागि मिति तोकियो ।
यसले के गरायो भने वास्तवमानै भैपरी आउँदा के गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भयो । वास्तवमा भैपरी चाहिँ यो फागुनमा आउदै छे तर यता त्यो मितिमा महाधिवेशन नगरिँदा यो पार्टीको विधानअनुसार यसको वैधानिकता सकिनेछ र त्यसको कारणहुने छ विधानत महाधिवेशन नहुनु । सँविधानले अर्को छ महिना थप्न दिएको छ तर महाधिवेशन जस्तो आम कार्यकर्ताबीच जाने कुरामा रुची नदेखाइएको भन्ने त अर्थ लाग्छ नै ।
यस्ता कतिपय परिस्थितिकै कारणले होला १४ औँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीको एजेण्डा नै दोहोर्‍याएको खण्डमा ‘सभापतिलाई हराऔं’ भन्ने देखियो । सभापतिले फेरी खडाहुने भन्ने त कुरा आयो तर उनका उजेण्डा भने आएका छैनन ।
निर्धारित समय फागुन ७ मा नै महाधिवेशन हुँदा भदौ महिनामा यो चारमहिनामात्रै बाँकीरहेको अवस्था हो । त्यही बेला उनले केही अवस्थाहरु प्रस्तुती गरेका छन । भदौ ८ मा न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुरा कानीमा महामन्त्री कोइरालाले जेजस्ता कुरा राखे ती रेकर्ड योग्य छन । तयसकारण त्यसकाकेहीअंश उनकै शव्दमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको हो । सभापतिमाथि संगठन सञ्चालन क्रममा कतिपय गम्भीर आरोप लागेको देखिन्छ । त्यसको जवाफ आयो भने त्यो पनि यसरीनै प्रस्तुत हुनेछ । हेरौं महामन्त्रीभनाइका ती केही अंश –
‘‘उहाँले मनोमानी गर्नुभयो । सभापतिले गरेका कामहरुको विरोध त गरिसकेका छौँ । उहाँ कुरा सुन्नुहुन्न महाधिवेशन आउँछ त्यसमा निर्णय गर्नुपर्‍यो । किनकि अरु विकल्प छैन । पार्टीमा सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति भनेको सभापति हो तर उहाँको निर्णय गर्न सक्ने क्षमतामा प्रश्न आयो । अहिले विभाग गठन भइरहेको छ । यो ९ महिनामा विभाग गठन गरेर के गर्नुहुन्छ ? उहाँले मान्छे आकर्षित गर्नका लागि विभाग गठन गर्नुभयो भोटका लागि । भोलि महाधिवेशन आउँदैछ त्यसमा आकर्षित गर्नका लागि विभाग बनाउनुभयो । विभागको संख्या दिनप्रतिदिन बढाउँदै हुनुहुन्छ ।
मनपरी गर्दै हुनुहुन्छ । भेटेर पनि भनेका छौँ । अहिले नबनाउनुस अहिले बनाएर के गर्न सक्नुहुन्छ । ९ महिनामा विभागले के गर्न सक्छ भनेर भन्दा पनि मान्नु भएन । आफ्ना कुरा राख्नबाहेक अरु केही गर्न सकिँदैन । भोक हड्ताल गर्ने हो भने अवस्था खतरापूर्ण आउन सक्छ । सबैभन्दा पहिले अधिवेशन गर्ने हो कि होइन ? समयमा गर्ने हो भने पहिले जिल्ला अधिवेशन गर्नुपर्‍यो । जिल्लाका सबै एकाइको हुनुपर्‍यो ।
क्रियाशील सदस्यता वितरण सही किसिमले गर्नुपर्‍यो । धेरै जिल्लामा समस्या छ । समस्याहरुलाई पार्टीले निर्देशन दिएर अगाडि बढ्नुपर्‍यो क्रियाशील दिने त वार्डले हो । १०—१० लाख क्रियाशील सदस्य बनाउँदा गाइजात्रा हुने डर छ । नसोधेर सबैलाई केन्द्रीय सदस्यमा घुसाउनु भएको छ । क्रियाशील सदस्यता दिनुभएको छ । आउनेहरु क्रियाशील हुन् कि होइनन् भनेर पनि पुष्टि गर्नुपर्‍यो ।’’
‘‘पार्टीलाई एक बनाउने अहिले धेरै गुट उपगुट छन् महाधिवेशनका लागि हुनु स्वाभाविक हो । तर महाधिवेशन सकिनेबित्तिकै पार्टीलाई एक बनाउनुपर्‍यो । जुन शेरबहादुरजीले सक्नु भएन । आजको मितिमा मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भन्नुहुन्छ ।’’
“लोकतन्त्र स्थापित नहुदाँसम्म अलाइन्स गर्नुपर्छ । डेमोक्रेसी अहिले पनि खतरामा छ । कम्युनिष्टहरु डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्दैनन्, संसदीय व्यवस्थामा उनीहरु विश्वास गर्दैनन् त्यसलाई दृष्टिगत गरेर मैले अलाइन्सको कुरा गरेको हो ।’’
‘‘मैले धेरैसँग परामर्श गर्दै छु । उहाँहरु तपाईं नै उठ्नुपर्‍यो भन्नुहुन्छ । तर मैले धेरै साथीहरुको दाबी छ भन्छु । रामचन्द्र दाई, सिटौलाजी हुनुहुन्छ । प्रकाशमान हुनुहुन्छ । तर धेरै उठेर त भएन नि । हाम्रो लक्ष्य के हुुनुपर्‍यो, हामी सबै मिलेर एकजना उठ्नुपर्‍यो । त्यसका लागि आपसमा वार्ता हुनुपर्‍यो । वार्तापछि हामी एक ठाउँमा पुग्न सकियो भने हुन्छ । व्यक्तिगत हिसाबले भन्नुहुन्छ भने शेरबहादुरजीलाई हराउने कोही व्यक्ति छ भने त्यो म नै हुँ । रामचन्द्र दाईले पनि सक्नुहुन्न । अरु जो पनि कसैले पनि सक्दैन यो ग्यारेन्टीका साथ भन्न चाहन्छु मबाहेक शेरबहादुरजीलाई हराउने व्यक्ति छैन ।’’ (क्रमशः)– सुवेदीको प्रस्तुती
देउवा पार्टी र सरकारको सत्तामा हुँदा सबभन्दा बढी लाभान्वित ‘विमलेन्द्र विद्रोह’को अर्थ ?
विमलेन्द्र निधिको उम्मेदवारीले कांग्रेसमा क्रमभंगता
देउवाले निधिलाई चौधौं महाधिवेशनबाट आफ्नो समूहको निर्विकल्प सभापति देलान ?
प्रकाशित मिति : भाद्र २१, २०७७ आईतबार ५ : ०७ बजे